Kutaura mutauro wakasikwa ibazi re chakagadzirwa njere iyo inobata nekugadzira, kunzwisisa uye kuongorora mitauro inoshandiswa nevanhu zvakasikwa kuitira kuti vataure nemakomputa munzira dzese dzakanyorwa uye dzakanyorwa vachishandisa mitauro yevanhu pachinzvimbo chemitauro yemakomputa. Artificial intelligence ndiyo mainjiniya uye sainzi yekuvaka uye kuvaka dzakangwara makomputa zvirongwa uye michina. Izvo hazvingopindire pachezvayo kumatekinoroji ayo anoonekwa nehupenyu uye ane hukama nepfungwa yekushandisa makomputa kuti unzwisise huchenjeri hwevanhu.
Dzazvino nzira dzeNLP dzinovakirwa pa machine learning' Kudzidza kwemuchina kwakabvumidza makomputa kuwana ruzivo rwakavanzika, vachishandisa maalgorithms anodzokororwa kuwana kubva ku data ravanopihwa, pasina kurongedzwa zvakajeka kwekutarisa. Zvizhinji zvekutsvagisa kuri kuitwa pakushandiswa kwemitauro yechisikigo zvinotenderera pakutsvaga, kunyanya kutsvaga kwebhizinesi. Iko kugona kwepurogiramu yemakomputa kuti unzwisise kutaura kwevanhu sezvazvinotaurwa.
NLP inowanzo kunzi computational linguistics ine mamwe mabasa akabatanidzwa senge ane zita rekubvisa chinzvimbo, yakadzika analytics, chidimbu chidimbu, co-reference resolution, chikamu-che-kutaura tagging, uye kupatsanura. Ndiyo munda unotarisa pakubatana pakati pemakomputa uye mutauro wevanhu. Iyo inogara pamharadzano yehungwaru hwekugadzira, mitauro yekuverenga, uye sainzi yemakomputa. Kune chero kutsva uchishandisa mutauro wechisikigo, chirongwa ichi pachacho chinozoziva chero rakapfupikiswa izwi kana mazita. Dambudziko riripo apo makomputa anofanirwa kunzwisisa mashandisiro anoita vanhu uye kudzidza mutauro. Mutauro wevanhu hauna kunyanyisa uye hauna kunyatsojeka. Kuti makomputa anzwisise mutauro wevanhu, vanofanirwa kunzwisisa iwo maficha uye kubatana kwavo nemazwi ekugadzira chirevo chine musoro. Semuenzaniso, funga nezve chirevo "Baby swallows fly." Zvino, izvi zvinogona kuve nezvakasiyana zvinoreva kuti zvive zvakaoma kuchirongwa kuti unzwisise zvazvinoreva shure kwazvo. Seshoko rekuti kubhururuka kana kumedza rinoshandiswa sechiito, izvo zvinoita kuti mwana ave sechipikisheni kana sezita. Mukati mevanhu kutaurirana, zvinoreva zvirevo zvinoenderana nekunzwisisika kwekusanzwisisika kwemunhu wese mumitauro yevanhu uye nemamiriro azvaitaurwa. Apa ndipo panofanirwa kugadzirirwa software kuti inzwisise zvimiro zvemitauro uye zvemamiriro.